Otu esi amalite ma ọ bụ jikọọ na ogbako na Mbugharị | Gam akporosis
Otu esi eme oku vidiyo na Mbugharị dị ka onye ọbịa ma ọ bụ ịbanye dị ka onye so na ya
Mbugharị bụ ngwa iji kpọọ oku vidiyo nke na-enwetawanye ewu ewu maka ọtụtụ ebumnuche. Otu n'ime ha bụ n'ihi oke mma nke mgbasa ozi vidio ya na nke ọdịyo, ma e wezụga ịbụ onye na-agbanwe agbanwe nke mere na ịchọghị nzere iji banye ogbako nke akpọrọ anyị site na njikọ URL.
A free ngwa, ọ bụ ezie na ya na-agaghị emeli dị ka ọ bụ ndị 40 nkeji kwa video oku ọ bụrụhaala na ọ bụ 3 ma ọ bụ karịa ndị sonyere, mana ọ bụrụ na anyị gbanwee na ndenye aha ha nke euro 13,99 kwa ọnwa, anyị ga-ewepụ ụfọdụ adịghị ike. Anyị ga-egosi gị otu esi eme oku vidiyo site na nkwụsị.
1 Isi omume ọma nke Mbugharị
2 Otu esi emepụta ogbako na Mbugharị: onye ọbịa
3 Otu esi ejikọ na oku vidiyo na Mbugharị dị ka onye so na ya
Isi omume ọma nke Mbugharị
Ewezuga ogo ya dị elu na vidiyo na ọdịyo mgbe ejikọtara anyị na ọgbakọ, Bugharịa guzo maka oke mgbanwe ya. Anyị na-ekwu nke a n'ihi na ewezuga inwe ike ijikọ mgbe ị debanyere akaụntụ, enwere ike ịme ya site na njikọ URL nke, dabere na ikpo okwu anyị mepere ya, ga-ewe anyị site na ntinye nke ngwa ahụ ma ọ bụrụ na anyị emeghị nwee ya na mkpanaka anyị, ma ọ bụ, ọ bụrụ na anyị esi na laptọọpụ mee ya, mee ya na weebụ.
Mgbanwe a na-eme ka onye ọ bụla nwere kọmputa ma ọ bụ ihe ọmụma gbasara ekwentị iji nweta ụlọ nzukọ na ọtụtụ ndị ọrụ ibe ya ma ọ bụ ezinụlọ ya na nkeji oge. Nke ahụ kwuru, site na mbipute n'efu anyị nwere oke nke nkeji 40 maka nzukọ nke mmadụ 3 ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgafe ihe mgbochi ahụ, anyị ga-akwụ ụgwọ, n'agbanyeghị mgbe ụfọdụ Mbugharị ga-enye anyị oge ọzọ dị ukwuu n'oge iji nọgide na-eji ya.
Mbugharị na-enyekwa ohere ụfọdụ ihe dị ka ịgbanyụ ụda na onye ọ bụla na-esonye, share ihuenyo, ikori, ozi nzuzo, na-ekele emoticons na ọbụna nyegharịa ndị sonyere. Ọ bụ ngwa a raara nye maka azụmaahịa ma ọ bụ ọkwa ọkachamara, mana ịbanye n'ime nhọrọ ya pere mpe nke ụdị ya bụ n'efu, ọ nwere ike ijere anyị niile ozi.
Otu esi emepụta ogbako na Mbugharị: onye ọbịa
Ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ ị na-arụ ọrụ na Mbugharị na ịchọrọ ike nzuko dika nnabata nzọụkwụ bụ ndị a:
Anyị na-ebudata mbugharị si gam akporo:
Nzukọ nzukọ igwe ojii
Ozugbo arụnyere anyị ga-ahụ nhọrọ ịbanye na ogbako ahụ. Anyị na-awụlị nzọụkwụ a ma anyị ga-emepụta akaụntụ anyị ga-achọ ịbụ onye nnabata.
Edebanyere aha na Google, ihuenyo ọzọ na-akpọrịrị anyị ka anyị bido Mbugharị iji mepụta ogbako.
Pịa na mbido mbugharị
Ya anyị na-aga ozugbo na ngwa na anyị ga-enwe na n'elu mkpọchi na-amasị anyị: nzukọ ọhụrụ, tinye, ịtọọ oge na òkè ihuenyo
N'okpuru ebe a anyị ga-enwe nzukọ a haziri ahazi nke onye ọ bụla garala ọgbakọ na akpọrọ nwere ike ịnata ya, enwere ike iziga ya na kalenda iji hazie ya.
Pịa na mmalite nzukọ
Ọ ga-jikọọ na Ọ ga-ajụ anyị maka ikike maka ịnweta igwe okwu, igwefoto na ebe nchekwa
A ga-emepe interface interface.
Ugbu a pịa ndị sonyere na obere mmanya na ihuenyo ọhụrụ pịa ịkpọ oku
Anyị na-enweta ihe niile ngwa nke anyị nwere ike izipu oku ya na URL njikọ
Anyị na-edepụta njikọ ahụ ma mado ya na otu WhatsApp n'onwe ya
Site na njikọ a ndị ọrụ niile chọrọ ịnweta site na ikpo okwu ọ bụla ha bụ iOS, A gam akporo, Windows na ndị ọzọ
A na-ejikwa ngwa ekwentị site na isi ihuenyo na vidiyo na jiri mmegharị ahụ nye ikike ịhapụ ndị so na ya na onye ozo n'aka ekpe iji kwusi vidiyo ma nwee odiyo. Agbanyeghị, anyị nwere ọrụ ndị a na ogwe ngwaọrụ dị ala.
Otu esi ejikọ na oku vidiyo na Mbugharị dị ka onye so na ya
Mbugharị mara site na ịdị mfe nke isonye na oku vidiyo ma ọ bụ ọgbakọ. N'adịghị ka ịmepụta ogbako dị ka onye ọbịa, mgbe anyị banyere dị ka onye so na ya anyị enweghị mkpa ịmepụta akaụntụ. Anyị na-eme ya dị ka nke a:
Anyị pịa gbasara njikọ ha zitere anyị na nkata na WhatsApp, ngwa ọzọ ma ọ bụ otu email ahụ.
A na-emepụta ihuenyo mbụ nke na-agwa anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta ogbako ma ọ bụ na-abanye dị ka onye nkiri na obere mbipụta.
Anyị pịa Tinye dị ka onye nkiri.
Ihuenyo na-esi na weebụ pụta ga-egosi anyị usoro bọtịnụ atọ: otu ịbanye ogbako (ọ bụrụ na anyị arụnyere ngwa anyị ga-eji nke a), ọzọ iji wụnye ngwa site na Playlọ Ahịa Google na ozo ibudata apk.
Anyị ga-eji bọtịnụ awụnyere site na Storelọ Ahịa Play.
Ozugbo arụnyere, anyị na-alaghachi na ihuenyo mbụ wee pịa Sonyere nzukọ.
Anyị nwekwara ike nyeghachi akwụkwọ ịkpọ oku url natara ma otu a anyị si ewepụta ihuenyo ahụ nke na-enye anyị ohere ịbanye na ogbako ahụ.
Ozugbo etinyere ya, ọ ga-akpọrọ anyị gaa ogbako na-enweghị aha.
Ya mere, anyi abanyela na nzuko ma anyi ga-enwe ijide interface iji mechie igwe okwu, mee ka vidiyo, tinye ihuenyo ma ọ bụ kesaa dọkụmentị dịka onyonyo na ndị ọzọ.
Ya mere ị nwere ike jikọọ na Mbugharị vidiyo oku ma nwee nnukwu ngwaọrụ maka nkwurịta okwu ụbọchị ndị a nke ịnọ n'ụlọ. Ngwá ọrụ bara ezigbo uru nke anyị kwurula banyere ya na ndepụta a nke kachasị mma ngwa ọdịnala na telecommute n'ụlọ n'ihi coronavirus.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi eme oku vidiyo na Mbugharị dị ka onye ọbịa ma ọ bụ ịbanye dị ka onye so na ya
doro anya ma doo anya. Ezigbo nkọwa.
Red na Blue bụ egwuregwu RPG ọhụụ ọhụrụ nwere echiche ọzọ dị omimi
Nyocha Smart: nke a bụ ngwa Huawei iji dozie ekwentị gị Ma ị nwere ike iji ya!